►IFantastic Apt kwi♥ yaseLa Paz - I-Airbnb
►IFantastic Apt kwi♥ yaseLa Paz
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJuan
Yiza uhlale kwindawo yethu entsha, epholileyo kunye nebanzi. Ibekwe kwindawo embindini weLa Paz. Ungafikelela kwezona ndawo zishushu kakhulu ukusuka ebumelwaneni baseSopocachi. Sikumgama ohamba ngeenyawo ukusuka kwizindlu zozakuzo, kwiindawo zokutyela, kwiindawo zentselo, kwiivenkile zeziyobisi, nakwiivenkile ezinkulu. Uya kuzithanda iimbono kunye ne-vibe yendawo. Ilungele iintsapho, abahlobo, izibini kunye nabahambi ababodwa. Incwadi ngoku isafumaneka!
Indlu ikwindawo emangalisayo. Ikhuselekile kakhulu kwaye nayo yonke into oyifunayo kufutshane. Ingalala ukuya kutsho kwiindwendwe ezi-2 kwibhedi eyi-Double size eyi-1. Uya kufumana amashiti, iitawuli, iTV, isitovu, ifriji, imicrowave, kunye nebhoyila yamanzi okhululekileyo ukuyisebenzisa. Olu lulwakhiwo olutsha nolwanamhlanje.
4.85 · Izimvo eziyi-33
ISopocachi yenye yezona ndawo zintle zaseLa Paz. Kukhuselekile kakhulu, uninzi lozakuzo lubekwe kufutshane. Ibonelela ngolonwabo oluninzi kwiintsapho, abahlobo, izibini okanye iingoma ezingatshatanga ngaphandle kokuncama isipaji sakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Juan
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Paz